कुकुरको पिसाब किन पिउँछिन् यी युवती, दुनियाँ चकित हुने यस्तो छ रहस्य ! - ramechhapkhabar.com
कुकुरको पिसाब किन पिउँछिन् यी युवती, दुनियाँ चकित हुने यस्तो छ रहस्य !
धेरै मानिस आफ्नो घरमा कुकुर पाल्न रुचाउँछन् । कहिलेकाहीँ मानिसको कुकुरप्रतिको लगाव यस्तो हदसम्म पुग्दो रहेछ कि कुकुरका हरेक चिज प्रिय लाग्दछन् अमेरिकामा बस्ने एकजना युवतीले आफ्नो घरमा पालेको कुकुरको पिसाब पिउने गर्दछिन् । आखिर कुकुरको पिसाब उनले पिउनुको कारण के हो ?
कुकुरको पिसाब पिउने युवतीको नाम लीन ल्यू हो । कुकुरको पिसाब पिउनाले अनुहारमा दागधब्बा नआउने, डण्डीफोर नआउने तथा क्यान्सरको उपचारमा पनि सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ ।
समाचार अनुसार उनले एकपटकमा एक गिलास कुकुरको पिसाब सिनित्तै पिउन सक्छिन् । रोचक कुरा त के भने आफ्नो घरको कुकुरले गरेको पिसाब कम हुँदा उनले छिमेकीको कुकुरको पिसाब संकलन गरेर समेत पिउँछिन् । मानिसहरुले आफ्नो अनुहारको चमकका बारेमा सोध्ने गरेको भन्दै उनले यसको रहस्य दिनहुँ पिउने कुकुरको पिसाब भएको बताउँछिन् ।
सुरुमा त उनलाई कुकुरको पिसाब पिउँदा निकै असजिलो भएको थियो । तर विस्तारै त्यो उनको बानी बन्यो । पहिले अनुहारमा निकै धेरै दागधब्का तथा डण्डीफोर थिए । तर कुकुरको पिसाब पिउन थालेपछि दागधब्बा हराएका अनुहारमा निखार आएको उनको भनाई छ ।